व्यक्ति हत्या गरेर मलेसिया र दुबईमा रोजगारी, १७ वर्षपछि समातिए कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त – Deep Sanchar
Sunday, February 27,2022 / आईतबार, फागुन १५, २०७८
रुसी योजना तोड्यौ, सरकार डगमगाएको छैनः राष्ट्रपति जेलेन्स्किी
प्रहरीसामु आत्मसमर्पण गरे पल शाहले
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, एक जना घाइते
युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खारकिवमा छिर्यो रुसी सेना
एमसीसी अनुमोदनका लागि गर्ने भनिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी के हो ?
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ व्यक्ति हत्या गरेर मलेसिया र दुबईमा रोजगारी, १७ वर्षपछि समातिए कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त
व्यक्ति हत्या गरेर मलेसिया र दुबईमा रोजगारी, १७ वर्षपछि समातिए कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त
दीप संञ्चार साउन २४, २०७७ गते ११:११ मा प्रकाशित
झापा – अपराध भएलगत्तै हुने सानो कमजोरीका कारण अभियुक्त भेट्न वर्षौं लाग्न सक्छ । कतिपय घटनामा प्रहरीलाई ढिलो सूचना पुग्दा अभियुक्त भारततिर छिर्छन् भने कहिलेकाहीँ अनुसन्धानको सुई सही दिशामा अघि नबढ्दा पनि अभियुक्त उम्कन्छन् ।
तर, अपराधमा संलग्नले जतिसुकै चतुर्याइँ गरे पनि कुनै न कुनै दिन अभियुक्त प्रहरीको फन्दामा परेरै छाड्छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाको पछिल्लो अपरेशनले यसको पुष्टि गरेको छ ।
झापाका एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताए अनुसार जिल्लामा १७ वर्षअघि भएको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा साबिक जलथल गाविस–८ का तत्कालीन समयमा २६ वर्षीय दुर्गा मगर भनिने दुर्गाबहादुर थापा छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रहरी निरीक्षक साकारराज पन्त नेतृत्वको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । मगरसहितको समूहले कुटपिट गरेर साबिक टाघनडुब्बा गाविस–४ का ४५ वर्षीय विरिकलाल माझीको हत्या गरेका थिए ।
सामान्य विवादमा हत्या गरिएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । कोइरालाका अनुसार अभियुक्त मगर घटना लगत्तै काठमाडौंतिर छिरेका थिए । त्यसपछि भारतको कोलकत्ता, दार्जिलिङ पनि पुगेको खुलेको छ । त्यतै रहँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र दुबई गएर उनी नेपाल फर्किएका थिए ।
हाल उनलाई जिल्ला अदालत, झापाबाट ५ दिन म्याद थप गरेर मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान थालिएको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकको एटिएम फोड्दै गरेका एक जना पक्राउ
एनआरएनए युकेले आइसीसीसँग एमओयू नभएसम्म सदस्यता शुल्क नतिर्ने, सेल्फी पनि…
युक्रेन संकटको मुख्य कारक अमेरिका नै रहेको उत्तर कोरियाको आरोप
युक्रेनमाथि रुसी हमला : कसको समर्थनमा छन् बेलायती राजकुमार विलियम ?
कैलाली काँग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुँदै
‘एमसीसी आजै दोस्रो सेसनमा पारित हुन्छ’-रामचन्द्र पौडेल